अन्तर्वार्ता – Page 54 – Etajakhabar
गायिका मिलन अमात्यले यसरी खोलीन् आफ्नो जीवनकै रोचक पक्ष (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौँ । सुगम सगिंतकी चर्चित गायिका हुन् मिलन अमात्य । आँखा रातै आँखा रातै, म नाइन्टिन इएरकी ब्यूटी, स्लोली स्लोली, उहिलेका बाहु बाजे रिसी मुनी, लगायतका दर्जनौँ गीतबाट चर्चाको शिखरमा रहेकी सुन्दरी गायिका अमात्यले ५ सय भन्दा बढी गीतमा स्वर भरीसकेकी छिन् । भारतको आसाममा जन्मेकी मिलन आफ्नो साँगीतिक यात्रासँगै नेपाल आईपुगीन् । छोटो समयमा नै निकै सफलता पाउन पनि सफल भईन् । उनले चलचित्र र आ...
यि पूर्वेली सुन्दरी जसले गायक राजेश पायल राईलाई मन पराउँछिन् (भिडियो)
ताजा खबर काठमाडौँ । पूर्वेली गायिका मिना राईले गायनमा प्रवेश गरेको करिब ३ वर्ष भयो । यसबिचमा उनले दुई दर्जन भन्दा बढी गीतमा स्वर दिएकी छिन् । लोक आधुनिक गीतमा नै बढी डुबेकी यि गायिका भन्छिन् गायनमा संघर्षरत नै छु । चाँडै ने कोरिया, दार्जलीगं लगायतका स्थानहरुमा कन्सर्टमा ब्यस्त यि गायिका गीत संगीतमा नै मरीमेटेर लागेकी छिन् । अवसरको खोजीमा रहेकी गायिका राईले आफ्नो नयाँ एल्बम ल्याउने तयारीमा छिन् ...
विशाल भण्डारीसँग नायिका बेनिशा हमालको के सम्बन्ध छ ? यसो भन्छिन् बेनिशा (भिडियो)
काठमाडौँ । नायिका बेनिशा हमाल पछिल्लो समयकी ब्यस्त नायिका हुन् । च्यानल नेपाल टेलिभिजनबाट रङ्गकर्ममा लागेकी नायीका उनी संचारकर्मी, म्युजिक भिडियो अभिनय हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा खुड्कीका उक्लिँदै गएकी छन् । स्वर फिल्मबाट चलचित्र डेब्यू गरेकी यि सुन्दरी नायिका चलचित्रसँगसँगै म्यूजिक भिडियोमा पनि उस्तैगरी जमेकी छिन् । चलचित्रको कुनै धार नहुने र कलाकार पनि यो धार वा त्यो धारको भनेर छुट्टाउन नहुने...
भोलि बाबुराम पनि हिटलर बन्न सक्नुहुन्छ’ : हिसिला यमी
काठमाडौँ – नेपाल साप्ताहिकले नयाँ शक्तिकी नेतृ हिसिला यमीसँग गरेको कुराकानी ः नेपालमा हिटलर जन्मने सम्भावना : ‘हामी कहाँ हिटलर नजन्मिने के ग्यारेन्टी छ र ! भोलि बाबुराम भट्टराई पनि हिटलर बन्न सक्नुहुन्छ । तर, समावेशीसहितको समृद्धिले बाबुरामजी वा नयाँ शक्तिलाई हिटलर बनाउँदैन । माओवादीभित्र सामन्तवाद माओवादीमा हुँदाखेरि नै कतिपय महिलाले नै मलाई संघीयताको पक्षमा उभिएको देखेर विरोध गर्थे । बाब...
कान्छासँग भागेर छोरो पाइहाल्ने चाहना राखेकी तिर्सनाको रोचक कथा (भिडियो)
ताजा खबर काठमाडौँ । लोक गायिका तिर्सना घर्ती मगर पछिल्लो समयकी ब्यस्त गायिका हुन् । बाल्गुगंकी तिर्सना पढ्नका लागी भनेर काठमाडौँ आए पनि उनको लगाव विस्तारै गायनमा बढ्दै गयो । त्यसपछि पढाई छोडेर उनी गायनमा लागीन् । २०६१ सालमा पहिलो दिलकी रानी बोलको गीत गाएर गायनमा प्रवेश गरेकी हुन् । आधा दर्जन एल्बम बजारमा ल्याएकी यि सुन्दरी गायिकाको चर्चित गीत माया लाइहालम, छोरो पाइहालमका कारण अहिले पनि चर्चा...
अन्तरवार्ता चलीरहेका बेला हट मोडल स्मृती जुरुक्क उठेर नाचेपछि पत्रकार अप्ठ्यारोमा (भिडियो)
[slockerpro id="1"]ताजा खबर काठमाडौँ । गायिका स्मृती पोखरेलले नायिकाका रुपमा पनि डेब्यू गरेकी छिन् । फिल्म चक्करमा अभिनय गरेकी उनी पछिल्लो समय सामाजिक संजाल र यूट्युबमा चर्चामा छिन् । उनी मोडलका रुपमा पनि चर्चित छिन् । तेस्रो एल्मबको तयारीमा रहेकी उनी भन्छिन् 'म मेरो काममा निष्पक्ष छु, मलाई मेरा रियल फ्यानले जे मनमा आउँछ त्यो सोच्ने छुट छ । ' बेकाब छ यो मौसम बोलकी गायिका स्मृती स्टेज पर्फमर ...
कलाकारको वियोगान्त गाथा, जन्मदिने बाबु मृत्यु शैयामा छटपटाइरहँदा पनि दर्शक हसाइरहनुपर्ने यो कस्तो विवशता ?
ताजा खबर काठमाडौँ । पछिल्लो समयका ब्यस्त अनि चर्चित मोडल तथा कलाकार हुन् महेन्द्र गौतम । आफ्नै आवाजमा गीत समेत बजारमा ल्याएर बहुमुखी प्रतिभा देखाइसकेका गौतम नाच्न मात्रै खप्पिस नभई भावनात्मक कुरा गर्नमा पनि माहिर छन् । उनले मानिसको जीवनमा दुख घुमीफरिी आइपर्ने र त्यसलाई टार्दै जानुपर्नेमा विश्वास राख्छन् । आफ्ना जन्मदाता बाबुले मृत्यु शैयामा छटपटाइ रहेको बेलामा पनि आफ्नो पेशााका कारण दर्शकलाई हँ...
चलचित्र बनाउनु भनेको जुवा नै खेल्नु हो, तर म खेलीरहन्छु : निर्देशक दिनेश डि.सी.
ताजा खबर, काठमाडौँ । बरिष्ठ संचारकर्मी तथा निर्देशक दिनेश डि. सी. नेपाली संचार क्षेत्र र कलाकारीतामा खारीएका अनुभवी ब्यक्ति हुन् । उनको काम र नामको यहाँ सँधै चर्चा हुने गरेको छ । यसैबिच उनै चर्चित हस्ती डिसीले नेपाली संचार क्षेत्रमा आधारभुत योग्यता समेत नभएका ब्यक्तीहरुको हालीमुहाली रहेको आरोप लगाएका छन् । जसका कारण नेपाली संचार क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको उनको भनाई रहेको छ । एक अन्तरवार्तामा कुरा...
अनमोलसँग काम गरिसकेकी रिस्ता भन्छिन् ‘सौगात मेरो बेष्ट’ ( भिडियो )
काठमाडौँ । सुन्दरी नायिका रिस्ता बस्नेत पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित नायिका हुन् । अभिनयमा लागेको छाटो समयमा नै ७ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी उनी होस्टेलकी एरिका नामबाट पनि परिचित छिन् । डेब्यू चलचित्र होस्टेलबाट नै राम्रो चर्चा पाएकी उनले अभिनयमा नै राम्रो सपना र संसार देखेको बताउँछिन् । होस्टेलमा अनमोल आदी बन्दा उनी एरीका बनेको फिल्मले राम्रो चर्चा पायो र फिल्मले राम्रो कमाई पनि गर्न सफल भयो । दि...